Imbali yeZizwe eziManyeneyo, uMbutho kunye neMisebenzi
Imbali, Umbutho, kunye neMisebenzi yeZizwe eziManyeneyo
IZizwe eziManyeneyo yintlangano yomhlaba wonke eyenzelwe ukuthotyelwa komthetho wamazwe ngamazwe, ukhuseleko, uphuhliso lwezoqoqosho, inkqubela phambili yentlalo, kunye namalungelo oluntu lula kumazwe ngamazwe ngamazwe. IZizwe eziManyeneyo ziquka amazwe angamalungu angama-193 kunye nekomkhulu layo eliphambili liseNew York City.
Ngaphambi kweZizwe eziManyeneyo (i-UN), i-League of Nations yintlangano yamazwe ngamazwe enoxanduva lokuqinisekisa uxolo kunye nentsebenziswano phakathi kweentlanga zehlabathi.
Kwasekwa ngowe-1919 "ukukhuthaza intsebenziswano yamazwe ngamazwe kunye nokuphumeza uxolo nokhuseleko." Ekuphakameni kwayo, i-League of Nations yayinamalungu angama-58 kwaye yaqwalaselwa ngempumelelo. Ngama-1930, impumelelo yayo yaphela njengoko iAxis Amandla (eJamani, e-Italy naseJapan) yafumana impembelelo, ekugqibeleni yaholela ekuqaleni kweMfazwe Yehlabathi II ngowe-1939.
Igama elithi "iZizwe eziManyeneyo" laye lahlanganiswa ngowe-1942 nguWinston Churchill noFranklin D. Roosevelt kwiSibhengezo seZizwe eziManyeneyo. Esi simemezelo senziwe ukuba sithethe ngokusemthethweni intsebenziswano ye-Allied (Great Britain, i-United States, kunye ne- Union of Soviet Socialist Republics ) kunye nezinye iintlanga ngexesha leMfazwe Yehlabathi II.
Kodwa i-UN njengoko yaziwa namhlanje, kodwa, ayizange isungulwe ngokusemthethweni de ngo-1945 xa i-Charter yeZizwe eziManyeneyo yabhalwa kwiNgqungquthela ye-UN kwi-International Organization eSan Francisco, eCalifornia. Le nkomfa yaba khona ngamazwe angama-50 kunye nemibutho engekho karhulumente-yonke into isayine iCharter.
I-UN ngokusemthethweni yaba khona ngo-Oktobha 24, 1945, emva kokumiselwa kweCharter.
Imigaqo ye-UN njengoko ichazwe kwiCharter kukugcina izizukulwana ezizayo ezivela kwimfazwe, ukuqinisa amalungelo omntu, nokuseka amalungelo alinganayo kubo bonke abantu. Ukongezelela, ikwajolise ekukhuthazeni ubulungisa, inkululeko kunye nenkqubela phambili yentlalontle kubantu bazo zonke iilungu lawo.
Umbutho weZizwe eziManyeneyo namhlanje
Ukuze kusebenze umsebenzi obunzima wokufumana amazwe alo malungu ukuba asebenzisane ngokufanelekileyo, i-UN namhlanje idibene ngamasebe amahlanu. Iyokuqala yiNdibano yeZizwe eziManyeneyo. Esi sisona sigqibo esisisigqibo kunye nomhlangano omele e-UN kwaye uxanduva lokuxhasa imigaqo ye-UN ngokusebenzisa iinkqubo kunye neziphakamiso. Yakhiwe onke amazwe, ilungiswa ngumongameli okhethwe kumazwe alungu, kwaye udibana noSeptemba ukuya kuDisemba ngamnye ngonyaka.
Ibhunga lezoKhuseleko lwe-UN elinye i-ofisi ekuhlanganisweni kwe-UN kwaye inamandla kakhulu kuwo onke amasebe. Unamandla okugunyazisa ukuthunyelwa kwamalungu ombutho we-UN amalungu, angenza isigunyaziso sokuphelisa umlilo ngexesha leengxabano, kwaye unokunyanzelisa izigwebo kumazwe ukuba azihambisani namagunya anikwe. Yenziwe ngamalungu amahlanu asisigxina kunye namalungu ayishumi ajikelezayo.
Isebe elilandelayo le-UN yiNkundla yezoBulungisa yamazwe ngamazwe, e-Hague, e-Netherlands. Eli sebe lijongene nemicimbi yezobugweba ze-UN. IBhunga lezoQoqosho kunye neNtlalo liSebe elijongene neNtlanganiso ejongene nokuphuhliswa koqoqosho kunye nentlalo kunye nokusebenzisana kwamazwe.
Ekugqibeleni, uNobhala weSebe le-UN eliphethwe nguNobhala Jikelele. Uxanduva lwayo oluphambili lubonelela izifundo, ulwazi kunye nolunye ulwazi xa kufuneka ngamanye amasebe e-UN kwiintlanganiso zabo.
Ubulungu beZizwe eziManyeneyo
Namhlanje, phantse zonke ezizimeleyo ezizimeleyo ezizimeleyo zimeli amalungu e-UN. Njengoko kuchaziwe kwi-Charter yeZizwe eziManyeneyo, ukuba lilungu le-UN kufuneka ukuba amkele uxolo kunye nazo zonke izibophelelo ezichazwe kwiCharter kwaye uzimisele ukwenza nayiphi na isenzo sokwanelisa ezo mfanelo. Isigqibo sokugqibela sokwamkelwa kwi-UN siqhutywa yiNdibano yesiGqeba emva kokuphakanyiswa yiBhunga loKhuseleko.
Imisebenzi yeZizwe eziManyeneyo namhlanje
Njengoko kwakudlulileyo, umsebenzi omkhulu we-UN namhlanje ukugcina uxolo kunye nokukhuseleko kuwo onke amazwe alo malungu. Nangona i-UN ayigcinanga impi yayo, inalo uxolo lokugcina uxolo olunikezelwa ngamazwe alo malungu.
Ekuvunyelweni kweBhunga lezoKhuseleko lwe-UN, aba bahlali balondolozwa kwiindawo apho impi esaziwayo iphelile ukukhubaza amaqhawe ekuhlaleni ukulwa. Ngomnyaka we-1988, amandla okugcina uxolo aphumelela i-Nobel Peace Prize ngenxa yezenzo zalo.
Ukongezelela ukugcina uxolo, i-UN ijolise ukukhusela amalungelo omntu kunye nokubonelela ngoncedo xa kunesidingo. Ngowe-1948, iNdibano yesiGqeba yamkela iSibhengezo soNyaka samaLungelo oluntu njengomgangatho wemisebenzi yamalungelo abantu. I-UN ngoku kunika inkxaso ngoncedo lwezobugcisa, inceda ekuphuculeni izakhiwo zomgwebo kunye nomgaqo-siseko, ukuqeqesha amagosa oluntu amalungelo, nokubonelela ukutya, amanzi okuphuza, indawo yokuhlala kunye nezinye iinkonzo zokunceda abantu abathunywe yindlala, imfazwe neentlekele zemvelo.
Ekugqibeleni, i-UN inendima ebalulekileyo ekuphuculweni kwezenhlalakahle nezomnotho ngeNkqubo yoPhuhliso lwe-UN. Lo ngumthombo omkhulu kuncediso lwegranti yobugcisa kwihlabathi. Ukongezelela, i-World Health Organization, i-UNAIDS, i-Global Fund yokulwa noGawulayo, isifo sofuba, kunye ne-Malariya, i-UN Population Fund kunye ne-World Bank Group ukubiza ambalwa amanani indima ebalulekileyo kule nxalenye ye-UN. I-UN iphinda iphinde ipapashe i-Index yoPhuhliso lwaBasebenzi ukubeka amazwe amazwe ngokubhekisele kwintlupheko, ukufunda nokubhala, imfundo kunye nokuphila kwithuba.
Kwixesha elizayo, i-UN imise into ekuthiwa yiiMillennium Development Goals. Ininzi yamalungu alo kunye nemibutho eyahlukeneyo yamazwe ngamazwe avumile ukufezekisa ezi njongo ezinxulumene nokunciphisa ubuhlwempu, ukufa kwabantwana, ukulwa nezifo kunye neengcinezelo, nokuphuhlisa ubambiswano lwehlabathi ngokubhekiselele kuphuhliso lwamazwe ngamazwe ngo-2015.
Amanye amazwe alungu aphumelele kwinani leenjongo zaloo mvumelwano xa abanye bengenawo. Nangona kunjalo, i-UN iye yaphumelela kwiminyaka kwaye ikusasa liza kuxela indlela ukuzaliseka kwenyaniso kwezi njongo kuza kudlala ngayo.
Funda iMbali yeMfazwe kuMntla weMntla we-Oregon
IsiCwangciso seSifundo sokufundisa ixabiso le-Three Digit Place Value
Ukugqithiselwa nge-BB-8! Isikhokelo sezinto zokudlala kunye nezinye iimveliso ze-BB-8